Etu esi wụnye ma nweta Mycroft na-arụ ọrụ na Raspberry Pi | Akụrụngwa n'efu
Etu esi wụnye ma nweta Mycroft na-arụ ọrụ na Raspberry Pi
Ọ dị ka onye ọ bụla chọrọ ịnweta onye enyemaka na-akwadoghị n'ụlọ. Ngwaọrụ na - enyere gị aka ọ bụghị naanị itinye egwu egwu, mana ị nwekwara ike idobe tiketi iji gosi ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ n'ụlọ ahụ naanị site na iwu olu.
Google, Amazon, Samsung, IBM, Microsoft, bụ ụfọdụ ihe atụ nke ụlọ ọrụ ndị bidoro onye inyeaka na-akwadoghị, mana ha niile nwere ihe ọjọ dabere na nnukwu ụlọ ọrụ. Ma ọ bụghị ihe niile dị ka nke ahụ, Enwere Mycroft, onye enyemaka na-akwadoghị nke amụrụ maka Gnu / Linux nakwa na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na Raspberry Pi, ịdị mfe ma dịkwa ọnụ ala inweta.
Nke mbu anyi aghaghi inweta ihe nile di nkpa nke bu ihe ndia:
Utu Pi 3
Ndị na-ekwu USB
Igwe okwu USB
Ọ bụrụ na anyị nwere nke a, tupu anyị agbanye ihe ọ bụla, anyị ga-agakwuru Mycroft na ebe nrụọrụ weebụ. N'ime ya anyị ga-enwe ọtụtụ onyonyo ntinye maka Raspberry Pi 3. N'okwu a anyị ga-ahọrọ onyonyo a na-akpọ PiCroft. Ewubere onyogho a maka Raspberry Pi 3 ma dabere na Raspbian. Ozugbo anyị ebudatara ihe oyiyi nwụnye, anyị na-echekwa ya na kaadị microsd. Maka nke a, anyị nwere ike iji mmemme ọ bụla maka ebumnuche a; Usoro dị irè na n'efu maka ọrụ a bụ Etcher.
Ozugbo anyị nwere kaadị microsd e dere, anyị ga-ebugo ihe niile ma gbanye Raspberry Pi. Na nke a ọ bụ adaba jikọọ keyboard maka omume nhazi nke Raspbian nwere ike ịjụ anyị dị ka WiFi paswọọdụ ma ọ bụ gbanwee aha njirimara na paswọọdụ nke onye ọrụ mgbọrọgwụ.
Oyiyi enwere na anyi dere ụfọdụ wizards nhazi nke ga - eduzi anyị na usoro niile, ya mere nhazi nke igwe okwu USB, igwe okwu yana onye inyeaka Mycroft ga-abụ ihe oge. Mana nke mbu anyi kwesiri akaụntụ MycroftEnwere ike inweta akaụntụ a na weebụsaịtị Mycroft, akaụntụ onye ọrụ a ga-eji na-echekwa mmasị anyị ma ọ bụ mmasị anyị site na igwe ojii. Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-ahụ otu onye enyemaka na-akwadoghị dị ka Mycroft nwere ike isi mee ọtụtụ ihe maka ụlọ anyị na obere ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Etu esi wụnye ma nweta Mycroft na-arụ ọrụ na Raspberry Pi